Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Tantara Mampihoron-koditra Amerikanina' Season 10 dia mizara ny fijery ny akanjo lava anaovany
by Trey Hilburn III March 11, 2021 22,160 hevitra
American Horohoro Story vanim-potoana 10 dia manomboka hafana. Vao nizara vaovao izay nasongadina izahay Macaulay Culkin's anjara asongadina ao amin'ny Instagram an'i Ryan Murphy. Ankehitriny isika dia mijery ny vatana manontolo amin'ireo zava-manan'aina maranitra maranitra hitantsika nofaizina tamin'ny teasertazy tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Ireo dudes goavambe dia mijoro lava miaraka amina palitao lava mirindra hampifanarahana amin'ny nifiny maranitra. Ireto zavaboary mijery vampira ireto dia toa mahazatra be ve? Raha efa nahita Blade 2, izany angamba no antony mahatonga ireo bandy ireo hahafantatra tsara.
Ny vampira ao Blade 2 nizara fijery iray tena mitovy. Loha sola, nify maranitra ary palitao lava. Ie. Zahao, zahao ary zahao. Ny fanontaniana lehibe dia izao, sao dia ireny vampana ireny?
Ny tohin'ny fizaran-taona farany an'ny American Horohoro Story dia Massachusetts. Mety io ve no notifirin'i Ryan Murphy Salem's Lot? Ny manodidina sy ireo silhouette sola ireo dia toa toa mifanaraka tsara, miaraka amin'ny tontolon'ny King. Misy iray hafa amin'izao fotoana izao Salem's Lot eny an-dàlana izao, ka izany dia mety ho fotoana hafahafa ho an'ny hafa handray an'io tontolo io. Saingy, raha nahita ny AHS ianao dia efa fantatrao fa mitsambikina manodidina lohahevitra toa ny adala i Murphy. Ny tiako holazaina dia eritrereto ny momba ny AHS Asylum. Ity dia niady tamin'ny mpamono olona, ​​monster, freaks, masera, ary vao fanombohana izany. Ka, angamba ireo vampanga ireo, raha vampanga, dia mety ho ampahany kely amin'ny tantara lehibe kokoa.
Tsy toa an'i Murphy ny mamerina lohahevitra sy American Horohoro Story dia efa nanao vampira taloha. Araka izany, mamerina mijery ve izy ireo? Eny, tsy fantatsika fa afaka maminavina isika ary amin'izao dia azo antoka fa toy izany ny fomba.
Ahoana ny hevitrareo lehilahy avy amin'ny farany American Horohoro Story? Eritrereto ity mety ho an'i Murphy Salem's Lot? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Zahao eto ny sary avy amin'ny Fifohazan'i Dexter.